तरलता फालाफाल, बिहीबार रु. २० अर्ब प्रशोचन गर्दै राष्ट्रबैंक Bizshala -
तरलता फालाफाल, बिहीबार रु. २० अर्ब प्रशोचन गर्दै राष्ट्रबैंक
काठमाण्डौ । बैंकिङ प्रणालीमा थुप्रिएको तरलता प्रशोचनका लागि नेपाल राष्ट्रबैंकले २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको रिभर्स रिपो जारी गर्ने भएको छ ।
केन्द्रीय बैंकले एक सूचना जारी गर्दै साउन १५ गते(भोलि) २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको रिभर्स रिपो जारी गर्ने भन्दै त्यसको अक्सन प्रक्रियामा सहभागी हुन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आह्वान गरेको हो ।
बैंकिङ प्रणालीमा साधारण प्रकृतिको अधिक तरलताको स्थिति देखिएमा अल्पकालीन अवधि (अधिकतम सात दिनको लागि) तरलता प्रशोचन गर्न प्रयोग हुने उपकरणलाइ रिभर्स रिपो भनिन्छ। यसमा बैंक तथा बित्तिय संस्थालाई निश्चित ब्याज तिर्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकिएको रकम ती संस्थाबाट सापटी लिने काम गर्दछ, जसले गर्दा बैंकिङ प्रणालीको तरलतामा कमी आउँछ।
यसरी सापटी लिंदा नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो स्वामित्वमा भएको ट्रेजरी बिल्स तथा बिकास ऋणपत्र धितोस्वरूप राख्नुपर्ने हुन्छ र यसमा तिर्नुपर्ने ब्याज बोलकबोल प्रक्रियाबाट निर्धारण हुन्छ । बोलकबोलमा सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमध्ये सबैभन्दा कम ब्याजदर बोल गर्ने संस्थालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी क्रमैसँग सापटी लिने काम गरिन्छ ।
तरलता प्रशोचन गर्ने उपकरण रिभर्स रिपो साउन १५ गते दिउँसो ३ बजे बोलकबोल हुने बताइएको छ । सोही दिन जारी भई यो उपकरण साउन २२ गते परिपक्व हुनेछ ।